Seychelles inoenda padhijitari padanho rezvenhau reItari nezvirongwa zvakanangwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Seychelles inoenda padhijitari padanho rezvenhau reItari nezvirongwa zvakanangwa
avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Hofisi inomiririra Seychelles Tourism muItari pamwe chete nekambani yekushambadzira Qatar Airways yatanga mishandirapamwe yevatengi ichipinda muzvikamu zviviri zvakakosha uye zviri kukura kwenzvimbo yekuenda - honeymoons uye ecotourism.
Seychelles iri mukutaridzika kwepamusoro kweitaly bridal portal Matrimonio.com.
Iyo portal ine 700,000+ vatengesi, mamirioni makumi maviri evashandisi vakasarudzika uye mamirioni manomwe ongororo.
Iye zvakare mutungamiri mune vezvenhau chiteshi vane vanopfuura 8,100,000 mafeni paFacebook, vanopfuura 3,950,000 vateveri pa Instagram uye 2,000,000 XNUMX XNUMX vateveri muPinterest uye kutanga muKutsvaga Injini Kushambadzira uye Kutsvaga Injini Kugonesa mhedzisiro.
Vakananga vakaroora vanoroora mumwaka unotevera wemuchato, mushure mekubviswa kwekurambidzwa kwemitambo yemuchato muna Chikumi wegore ra2021 neHurumende yeItari, Seychelles ndiyo nzvimbo yekutarisisa yepamusoro yeitaly bridal portal Matrimonio.com.
Mutungamiri wepasirese pakuronga muchato pamhepo aine 96% mugove wemakumi mashanu nemakumi mashanu emichato inoitwa gore rega rega muItaly uye inoshanda mumisika gumi nembiri pasirese, ino portal yemuchato ndiyo inonyanya kukosha kune vakaroorana vari kuronga muchato wavo uye inoratidza zvese zvine chekuita nemuchato, zvakadai sezvipfeko, nzvimbo, maruva uye kuenda kumuchato. Basa ravo rinosanganisira kubatsira vakaroorana kuronga muchato wavo nekuvabatanidza nevatengesi vepamusoro munzvimbo mavo.
Iyo portal ine 700,000+ vatengesi, mamirioni makumi maviri evashandisi vakasarudzika uye mamirioni manomwe ongororo. Iye zvakare mutungamiri mune vezvenhau chiteshi vane vanopfuura 20 mafeni paFacebook, vanopfuura 7 vateveri pa Instagram uye 8,100,000 3,950,000 2,000,000 vateveri muPinterest uye kutanga muKutsvaga Injini Kushambadzira uye Kutsvaga Injini Kugonesa mhedzisiro.
Iyo purojekiti, mukushambadzira pamwe neQatar Airways, inosanganisira maviri ekumanikidza ekushambadzira matanho, kuburikidza nedesktop uye nharembozha, kushambadza uye kutarisira pasocial media, kukurudzira vakaroorana kuronga kwavo Seychelles honeymoon nemapakeji ezororo. Kumhanya kubva muna Chikumi 2021, mushandirapamwe unowedzeredzwa nechikamu chechipiri chekutsvaga nekutarisisa mushandirapamwe, uye gwaro renhau rakasarudzika kune dhatabhesi rese reva 190,000 varoora venguva yemberi uye vachati.
Tourism Seychelles ane chivimbo chekuti mushandirapamwe uchakurudzira chikamu chehusiku, chakange chakarara nekuda kwehosha yeCOVID-19 kubvira gore rapfuura kuti Seychelles ndiyo nzira yakakwana yekuroora kwevakaroora vanotsvaga kuchengetedzeka, kushamwaridzana uye paradhiso isina kumbobatwa.
Zvakare, Seychelles Tourism iri kutora chimwe chikamu chakakosha kwazvo chiri kukura nekumhanya - ecotourism.
Chinangwa chayo ndechekukurudzira mufambi mutsva, uyo ane hanya nenyaya dzekuchengetedza uye achitsvaga nzvimbo dzakajeka uye dzechokwadi senge Seychelles, nezvishamiso zvaro uye kutarisisa kwekuchengetedza, Seychelles ichaonekwa mumwedzi iri kuuya mune yakakurumbira chimiro cheItaly. magazini La Rivista della Natura uye ayo epamhepo uye enhau midhiya chiteshi.
Natura, inoburitswa makota matatu, achizvikudza vamwe vaverengi zviuru makumi maviri, pamwe nekuvapo kwakasimba pamhepo pamwe neayo webhusaiti yepamutemo uye nhepfenyuro yemagariro enhau anga ari mutungamiri mune zvakasikwa uye nharaunda misoro kubvira 20,000. Inozivikanwa nemifananidzo yayo yemhando yepamusoro uye zvinonakidza zvemukati, zvakaburitswa. zvinyorwa zvishoma muchikamu chega chega chekota zvinosainwa nenyanzvi huru pane zvakasikwa uye nezvenharaunda. Iyo Rivista della Natura inogoverwawo mukati mezviitiko zvakawanda uye fairs yekutengesa. Chinyorwa chega chega chinoratidzira mafambiro-akasarudzika mafambiro uye nzendo kuenda kunzvimbo dzenyika nekune dzimwe nyika nekutarisisa kwakanangana nekufamba kwakasimba, nzvimbo dzesango, mhuka nezvirimwa.
Chinyorwa chega chega chine chinongedzo "HUPENYU" - inofukidza nyaya dzakadai sehunhu, misika, kufamba kwakasimba - kwakatsaurirwa kuhukama pakati pevanhu nenharaunda, nepo zvimwe zvikamu zvichitarisa pane mazano nezvehunhu hwehupenyu hwezuva nezuva uye maitiro akanaka evaverengi anogona kuita chengetedza ivhu kubva mukusvibiswa, nepo mapuratifomu aro epamhepo achiendesa matsamba akazvipira uye zvemukati zvakasarudzika.
Mushandirapamwe wevatengi unosanganisira zvinyorwa zvakatsaurirwa kuSychelles, mapeji ekushambadzira, tsamba dzinotsigirwa uye webhusaiti yakasarudzika mabhenji anoonekwa nevamwe vashandisi ve1,712,360 pagore.
Mu2019, Seychelles yakagamuchira 27,289 XNUMX vashanyi vanobva kuItaly.